Introduction I love kids. तिनीहरूले हामीलाई देखाउन किनभने म बच्चाहरु प्रेम कारण छ. तिनीहरूले सानो ऐनाले जस्तै हुनुहुन्छ. मलाई मतलब के तपाईं बताउन गरौं. Kids have pretty much all of the...
5 बनाम शब्द.5झूट
हामी एउटा सन्देश प्रतिक्रिया बाटो कसले देखि छ मा निर्भर गर्दछ. मलाई तपाईं एउटा उदाहरण दिन गरौं. पराई सडक मलाई सम्म हिँड्छ र भन्छन् भने, “Let me borrow...
Brag Pt गर्न निर्मित. 2
एयर Jordans प्रतिष्ठित छन्. म तिनीहरूलाई धेरै हुनत बढन लगाउने छैन, मेरो आमाबाबुले मलाई हास्यास्पद महंगा जूता किन्न इन्कार गर्ने. म यसलाई मन थिएन, but I knew I would never get...
This video and manuscript is from Trip’s General Session at the Legacy Conference 2013. Introduction The theme of this conference is Soli Deo Gloria, परमेश्वरको महिमा वा एक्लै. त्यो एक महान विषय हो. And...
Brag Pt गर्न निर्मित. 1
कसैले नाम droppers रुचि. तपाईं म कुरा गर्दैछु जो थाह. जो तपाईं चाहनुहुन्छ ती मानिसहरू तपाईं शायद जान्न चाहन्छु कि मान्छे थाह थाह. म "namedropper लाग्छ जब,” there’s one...
हामी मा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ?
म सुरुदेखि Trayvon मार्टिन सागा संग राखिएको गर्नुभएको. तपाईं को धेरै जस्तै म हेर्नुभयो समाचार कभरेज, यो लेख पढ्न, र साथीहरूसँग यो बारेमा कुरा. It dominated public conversation...